Shwe Myanmar MPT value added service portal
မိုဘိုင်း သတင်းစာ (နေ့စဉ် သတင်းဝန်ဆောင်မှု)
ရယူရန် ခလုပ်ကို နိပ်ပြီး SMS ပို့ပါ။ အတည်ပြုရန် SMS လက်ခံရရှိမည်။
အတည်ပြုရန် ခလုပ်ကိုနိပ်ပြီး SMS ထပ်မံ ပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှု ရယူပြီး အောင်မြင်ကြောင်း SMS ရရှိပါမည်။
အကူအညီလိုအပ်ပါက 24/7 Customer Services ဖုန်း 01-2305273 , 09-5401888 , 09-5151010 , 01-652283 , 01-507153 , 01-507154 , 106 သို့ဆက်သွယ်ပါ။
8205 သို့ပေးပို့ရမည့် စာသား
သတင်း ၀န်ဆောင်မှု (ဇော်ဂျီ) ZNWR ရယူရန် ZNWRON အတည်ပြုရန် ZNWROFF ပယ်ဖျက်ရန် ၅၃ ကျပ်
Unicode ဘာသာ ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်များကို ကြည့်ရန်
သတင်း ၀န်ဆောင်မှု (ယူနီကုဒ်) UNWR ရယူရန် UNWRON အတည်ပြုရန် UNWROFF ပယ်ဖျက်ရန် ၅၃ ကျပ်
သတင်း ၀န်ဆောင်မှုမှ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ လတ်တလော သတင်းများ၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဈေးကွက်၊ ထူးခြားဆန်းကြယ် ဖြစ်စဉ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် နည်းပညာနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းများကို သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သတင်း ၀န်ဆောင်မှု ၀ယ်ယူခြင်း
ဖော်ပြပါ သတင်း ၀န်ဆောင်မှုများကို ၀ယ်ယူလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် (၈၂၀၅) သို့ သတ်မှတ်ထားသည့် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော အတိုကောက် စကားလုံးကို စာတို (SMS) ပေးပို့၍လည်းကောင်း၊ ရွှေမြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုက် www.shwemyanmar.com.mm တွင် အသုံးပြုလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်၍သော်လည်းကောင်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဈေးနှုန်းများ ၀န်ဆောင်မှုကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ မြန်မာဘာသာအနေဖြင့် ဇော်ဂျီနှင့် ယူနီကုဒ် နှစ်မျိုးကို သီးခြားစီ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ - သတင်းဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာဘာသာ (ဇော်ဂျီ) ဖြင့် ရရှိလိုပါက “ZNWRON” ဟုလည်းကောင်း၊ မြန်မာဘာသာ (ယူနီကုဒ်) ဖြင့် ရရှိလိုပါက “UNWRON” ဟုလည်းကောင်း ဖုန်းနံပါတ် ၈၂၀၅ သို့ စာတို (SMS) ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်နားလိုပါက မြန်မာဘာသာ (ဇော်ဂျီ) အတွက် “ZNWROFF”၊ မြန်မာဘာသာ (ယူနီကုဒ်) အတွက် “UNWROFF” ဟု ဖုန်းနံပါတ် ၈၂၀၅ သို့ စာတို (SMS) ပေးပို့ရပါမည်။
ရရှိမည့် ၀န်ဆောင်မှု နမူနာ -
ကာတာလေကြောင်းလိုင်းက ဆော်ဒီ ခရီးစဉ်အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်း https://goo.gl/1mub1Y
ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့အနီးရှိ ရွာများသို့ ကြွက်ကောင်ရေ သောင်းနှင့်ချီ နေ့စဉ်လာရောက်၍ သီးပင်စားပင်များ ဖျက်ဆီးနေ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့အနီးရှိ ဇီးချိုင်၊ ငွေတောင်နှင့် ကံချိုင်ကျေးရွာများ သို့ ဇွန် ၃ ရက်မှစ၍ ကြွက်အကောင်ရေတစ်သောင်းခန့် ပါဝင်သည့် ကြွက်အုပ်ကြီးများ နေ့စဉ်လာရောက်၍ ဒေသခံများ စိုက်ပျိုးထားသော သီးပင်၊ စားပင်များကို ဖျက်ဆီးနေကြောင်း သိရှိရသည်။ အပြည့်အစုံဖတ်ရန်
ကာတာလေကြောင်းလိုင်းက ဆော်ဒီ ခရီးစဉ်အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်း
ကာတာလေကြောင်းလိုင်းက ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ၎င်း၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက် သည်။ အပြည့်အစုံဖတ်ရန်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မုန်တိုင်းကြောင့် .....
၀န်ဆောင်မှု ပေးပို့သည့် အချိန်
သတင်းဝန်ဆောင်မှုကို တစ်နေ့ (၂) ကြိမ် ပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် နံနက် ၁၀း ၀၀ တစ်ကြိမ်၊ ညနေ ၃း၀၀ နာရီတစ်ကြိမ် အချိန်တွင် ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာအတွက် ၀န်ဆောင်မှု နှုန်းထား - တစ်လ ၁၅၇၅ ကျပ်
ဖုန်းမှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလိုပါက 8205 သို့ ဟု SMS ပို့ပါ။
Online မှ ၀ယ်ယူလိုပါက အောက်တွင် ၀န်ဆောင်မှု ရယူလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပြီး OK ကို နိပ်ပါ။
Fill MPT Phone Number: 959
Brought to you by eTradeMyanmar Co., Ltd.
MPT official VAS partner.
မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
၀န်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများ၏ တုံပြန်ချက်များ
About Shwe Myanmar
Copyright © 2015 - 2018 Shwe Myanmar. All Rights Reserved.